I-WSL: Uyifaka njani kwaye uyisebenzise inkqubo esezantsi Ubuntu kwi Windows 10 | Ubunlog
IPablinux | | Tutorials, Ubuntu
Kwiminyaka emithathu edlulileyo, Microsoft thaca I-WSLSisichazi seWindows Susbystem yeLinux. Njengomsebenzisi woBuntu ndicinge "Oku akunamsebenzi, ngekhe ndisebenzise ukuba sele ndisebenzisa Ubuntu njengomthonyama", kodwa ingaba ndandinyanisile? Mhlawumbi akunjalo. Ndiqalisile ukusebenzisa iWSL kwi Windows 10 kuba ndingumsebenzisi weLinux, kuba Ubuntu bokugcina Isinika amathuba anomdla kakhulu ekufuneka ukuba ube nawo.
Ngokusengqiqweni, ayifezekanga. Njengoko siza kuchaza apha ngezantsi, kuyakubakho imisebenzi esingenakuyenza, ngokuyinxenye kuba into esiza kuyifaka kwaye siyisebenzise sisiphelo kuphela, oko kukuthi, iwindow apho siza kungenisa khona imigca yokuyalela ukwenza oko sikufunayo. Apha ngezantsi ndicacisa amanyathelo oza kuwalandela ukufaka i-Ubuntu 18.04 terminal ngaphakathi Windows 10 kunye nento esinokuyenza ngayo.
1 I-WSL, iqhuba imiyalelo yeLinux Windows 10
2 Yintoni esinokuyenza nesingakwaziyo ukuyenza nge-WSL
3 Kodwa kukho ingxaki ngeendlela ...
I-WSL, iqhuba imiyalelo yeLinux Windows 10
Ngaphambi kokuba siyisebenzise, ​​kufuneka siyifake. Amanyathelo ekufuneka elandelwe aya kulandela:
Siya kwiVenkile ye-Microsoft kwaye sifake Ubuntu 18.04.
Okulandelayo, kufuneka sisebenzise lo myalelo ulandelayo njengomlawuli. Ukwenza oku, cofa ekunene kwi-Start kwaye ukhethe "Windows PowerShell (Administrator)":
Silindele ukuba iWSL yenziwe isebenze. Nje ukuba inkqubo igqityiwe, kufuneka siqale kwakhona. Ngokuzenzekelayo, iphawulwe njengo "ewe", ukuze sikwazi ukuqala kwakhona ngokucinezela Ngena. Sinokwenza amanyathelo okuqala ngokuchaseneyo: qala ngokwenza iWSL kwaye emva koko ufake Ubuntu.
Emva koko, siqala Ubuntu kwimenyu yezicelo.
Silinde ixesha elithile ukuba le nkqubo ifake.
Xa ixesha lifika, liza kusicela igama lomsebenzisi. Kuya kufuneka siyingenise ngonobumba omncinci kwaye ucinezele u-Enter.
Kwiphasiwedi, siya kwenza ngokufanayo nakweyiphi na enye indawo: yibeke kube kanye, cinezela ukungena, uyibeke kwakhona ukuze uyiqinisekise kwaye ucinezele u-Enter kwakhona.
Kwaye iya kuba kuphela. Sele sinayo Ubuntu bendlela efakwe kwiWindows. Ngokuzenzekelayo sele siyisebenzisa imiyalelo efana ne-APT, ke uvavanyo lokuqala endilucebisayo kukufaka "neofetch":
Ukuyivula kwaye ubone into efana nomfanekiso we-header, kuya kufuneka uchwetheze "neofetch" ngaphandle kwezicatshulwa. Kubonakala kubalulekile ukuyikhankanya loo nto Singayazisa imiyalelo yeLinux kwiWindows PowerShell okanye ngokuthe ngqo kukhetho «Phumeza«.
Yintoni esinokuyenza nesingakwaziyo ukuyenza nge-WSL
Into ekufuneka uyicacisile malunga nokuba yintoni isiphelo sendlela. Icaciswe ngokukhawuleza nangokungalunganga, yinkqubo yokusebenza leyo isebenza kuphela kwaye isebenza kuphela ngeelayini zomyalelo kwaye ayinakho ukubonisa imifanekiso ngaphaya kokubhaliweyo esikufakileyo / esikubonisayo. Oku kuthetha ukuba, umzekelo, singafaka nayiphi na inkqubo ekhoyo kwii-Ubuntu zokugcina, kodwa asizukukwazi ukumilisela abo basebenzisa i-GUI, enje ngeFirefox (nangona kungenangqondo ukufaka nantoni na iyafumaneka ngokusemthethweni kwiWindows). Ikwathetha ukuba asizukukwazi ukulandela, umzekelo, le isifundo sokurekhoda isikrini kunye neffmpeg: ukuba singenisa lo myalelo kwaye ucinezela u-Enter, umsebenzi uza kuqala, kodwa uya kuyeka xa uqaphela ukuba "akukho sweni esikhoyo".
Ngexesha lokubhalwa kweli nqaku, ayihambelani neephakheji ze-Snap, ngenxa yoko khange ndikwazi ukuvavanya iphakheji esivumela ukuba sijonge ii-GIFs kwisiphelo sendlela (ndiza kubhala inqaku malunga nayo).
Kodwa ukusukela oko sakhankanya ffmpeg, yitsho loo nto ewe singayisebenzisa ukuguqula iifayile, into esichaza kuyo eli elinye inqaku. Kodwa kuqala kufuneka sifake isoftware kunye nakho konke ukuxhomekeka kwayo (Sudo apt install ffmpeg). Sinokufaka kwakhona i-ImageMagick kwaye siyenze le enye, eya kuthi isivumele ukuguqula / ukuhlela imifanekiso kwiibhetshi.
Kodwa kukho ingxaki ngeendlela ...
Into endinqwenela ukuba bayilungise kwixa elizayo inxulumene nayo Iindlela. Abafani kwaye akabazi ngokufanayo. Ingxaki yindlela iWindows ebabhala ngayo kunye nendlela eziLinux ezifuna ngayo. Into elungileyo kukuba, kulula ukukhumbula indlela yokuguqula indlela ukusuka kwiWindows ukuya kwiLinux.
Umzekelo: umendo C: \_ AbasebenzisiPabloDesktop Windows iya kuba / mnt / c / Abasebenzisi / iPablo / i-Desktop. Ukwazi oko, ukuba sifuna ukurhuqa ifayile yeWindows kwisiphelo se-Ubuntu, into ekufuneka siyenzile ngokusisiseko utshintshe ubuyela umva kwimivalo eqhelekileyo, bhala unobumba omncinci "c", susa ikholoni kwaye ngaphambili wongeze "/ mnt /". Akukho nzima ukuyikhumbula.
Nantsi ke indlela iWSL efakwe ngayo nesetyenziswa ngayo kwiWindows 10. Ukuthathela ingqalelo ubungakanani beedrive ezinzima zekhompyuter yangoku kunye namathuba asinika wona, Ndicinga ukuba kufanelekile ukuba ifakwe. Ndishiya eli nqaku ngomyalelo olandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » I-WSL: Uyifaka njani kwaye uyisebenzise inkqubo esezantsi Ubuntu kwi Windows 10
Iluncedo kakhulu, enkosi kwesi sifundo, ngaphandle kokwazi nantoni na malunga neLinux, ndikwazile ukufaka nokuqonda kancinci into echaziweyo.
Ndiyabulela kakhulu ?
Sele ndiyifakile kwaye bendisenza iimvavanyo, kodwa andazi ukuba ndingazisebenzisa njani iinkqubo endizifakileyo ku-Ubuntu ukusuka windows kunye nokusetyenziswa kwazo.
Umzekelo, ukuba ndifuna ukusebenzisa i-git, eza nobuntu, ukusuka kwikhowudi ebonakalayo yesitudiyo efakwe kwiifestile, ndingayenza njani?
Okanye ukuba ufuna ukusebenzisa i-docket okanye i-apache kunye ne-mysql, phakathi kwezinye izinto.
Umbono kukuba nakho ukusebenzisa i-Linux usetyenziso olusuka kwiWindows, ngaphandle kokungena kwikhonsoli.
UDaniel, ndicebisa ukuba uzame uLaragon. Isisombululo esinomdla kakhulu kwiWindows. (Ayisebenzi kwiLinux.)
Kuzo zonke iimeko zophuhliso lwewebhu yeyona nto igqibeleleyo. Yiza neApache 2.4, Nginx, MySQL 5.7, PHP 7.4, Redis, Memcached, Node.js 14, npm, git kwaye ungayiphucula ngokufaka (bah, ukuvula iZIP kwifolda ethile) ngoku kulandelayo: phpmyadmin, Node.js / MongoDB, Python / Django / Flask / Postgres, Ruby, Java, Go.
Ndiyekile ukusebenzisa i-XAMP kunye ne-WAMP kuba ilula ngokwenene kwaye izisa yonke into oyifunayo.
USebastian Valencia Carvajal sitsho
Molo, ungandinceda? Ndifumana le mpazamo ilandelayo kwisiphelo sendlela yobuntu kwiifestile:
Msgstr "iWslRegisterDistribution isilele ngempazamo: 0x80370102
Impazamo: 0x80370102 Umatshini obonakalayo awunakuqaliswa kuba uphawu olungafunekiyo alufakwanga. "
Kuya kucaciswa ukuba wenza ngqo onke amanyathelo abonisiweyo.
Phendula uSebastian Valencia Carvajal
UHoracio Lobato Escoto sitsho
Ndifuna ukwaba ukuba ndenze nje uvavanyo ukufaka Ubuntu 20.04 lts kwi-WSL, ngaphambili bendisele ndifakelwe i-X iseva, iXMING. Ukuqalisa iserver yeXMING kuqala, kwiseshoni Ubuntu sibhengeza imeko-bume esingqongileyo DISPLAY =: 0.0, ngale nto ngoku unokufaka kunye nokusebenzisa usetyenziso lwegraphic Ubuntu.
Ndiyathemba ukuba oku kuyanceda umntu.
Phendula uHoracio Lobato Escoto
Kwilebhu yam ndiyifakile ngaphandle kweengxaki, kodwa ekhaya Ivenkile kaMicrosoft indiphosela impazamo "Khowudi: 0x80131500" kwaye akukho ndlela yokuyibuyisela. Bacebisa ukufomatha kunye nokufaka iiwindows, kodwa andifuni kwenza ingxaki engaka. Ndifuna nje ukuyisebenzisa kodwa andinayo indlela yokukhuphela usetyenziso lwe-Ubuntu kwiVenkile. Ngaba ikhona indlela yokufumana olo hlobo Ubuntu ngaphandle kweVenkile kaMicrosoft? Ndiyabulisa!
Kukho ingxaki enkulu, ukuseta iqokobhe lamandla modalità amministratore, wsl di inguqulelo emiselweyo 1.
i-wsl -set-default-inguqulelo 1
Into endiyenzileyo ndiyilandele fa vedere le versione nge-varie app nganye
poi potete kude manuale
I-wsl -set-version nome app (uluhlu lwezenzi) inombolo yenguqulo
landela ibhlog yam super-blog-info.blogspot.com
IFirefox 70 beta isungula icandelo le "Iindaba" ngolwazi olunokuba nomdla kuthi